WINE 6.0-rc4 inosvika pazuva reKisimusi ichigadzirira inotevera kuburitswa | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.0-rc4 inosvika pazuva reKisimusi kuenderera mberi kugadzirira kuburitswa kunotevera
Uye saka zvichave kusvika kuburitswa kweshanduro yakagadzikana. Vhiki mushure meyechitatu Regedza Musarudzo, WineHQ yaenderera mberi nehurongwa hwayo husingakanganike uye akakanda WAINI 6.0-rc4. Sezvo mune matatu apfuura, uye ayo anowanzo buritsa vhiki mbiri dzese vasati vasvika kuRC, iri vhezheni yekuvandudza, asi imwe iri padyo neshanduro yekupedzisira iyo ichasvika munguva pfupi iri kutevera.
Kusiyana neshanduro dzekuvandudza dzinoburitsa vhiki mbiri dzese uye pamberi peRC, WineHQ haichadoma shanduko dzinozivikanwa, uye chikonzero ndechekuti vakatopinda muchimiro chemafizizi. Zvese zvavanosanganisira izvozvi ma tweaks ekuvandudza iyo software yavakange vatotangisa mumavhiki apfuura. Zvakadaro, ivo vanotaura vanogadzirisa makumi maviri nesere uye hwakazara hwe 37 kuchinja. Zvine musoro, izvo hazvisi chinhu kana zvichienzaniswa neavo vakaunzwa pamberi pechikamu ichi chebudiriro, icho chinogona kuwedzera huwandu negumi, asi zvakafanira panguva ino.
WINE 6.0 inogara imwe nguva munaNdira
Kunge svondo rapfuura, uye mune maviri apfuura kuburitswa, WineHQ inosimbisa svondo rino chete «gadzirisa bug chete, isu tiri mune kodhi inomisa«. Iyo yakagadzikana vhezheni yeWINE 6.0 ichauya imwe nguva muna Ndira.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.0-rc4 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati eSte y uyu mumwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Kana pasina chinoitika, inotevera vhezheni ichave WINE 6.0-rc5 uye ichasvika pazuva rekutanga ra2021ndiko kuti, muna Ndira 1 wegore ratiri kuda kupinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.0-rc4 inosvika pazuva reKisimusi kuenderera mberi kugadzirira kuburitswa kunotevera